Akụkọ - Ihe omuma ohuru na COVID-19
COVID-19 Ọ bụ ezie na ọ jọgburu onwe ya, oge ọgba aghara n'ime afọ ndị gafeworonụ akpaliwokwa ụfọdụ n'ime ihe ndị a ma ama n'akụkọ ihe mere eme ka na-arụ ọrụ taa. Site na ụgbọ ala emere n'oge Middle Ages iji nyere ndị medics aka ịbugharị ndị ọrịa ngwa ngwa, iji teepu teepu n'oge WWII na-enyere ndị agha aka idozi akụrụngwa na nchikota, na ọrụ Isaac Newton na mbido usoro na ike ndọda mgbe ha 'na-arụ ọrụ n'ụlọ' n'oge Ukwu Ihe otiti nke London, ọrịa na-efe efe nke mba na nke ụwa abụwo ntọala maka ihe ọhụrụ na ihe okike maka nsogbu nke oge ahụ. Site na ọganihu ndị a na-adịbeghị anya na usoro nhicha, ihe mkpuchi ndị ọzọ, yana ọtụtụ ngwaọrụ iji gbochie gị ịmetụta akụkụ dị iche iche, ọrịa coronavirus ugbu a egosila na ọ dị iche.
Otu n’ime ihe ndị ama ama pụrụ ịpụta site n’ọrịa na-efe ugbu a bụ ọtụtụ ihe eji ekpuchi ihu. Ikekwe esiri mbụ enweghị nke mkpofu na N95 masks na-atụ aro n'oge mmalite, anyị ahụwo a ọgọ ke arụrụ n'ụlọ suppliers Nnyocha e mere n'oge na-adịbeghị anya gosikwara ihe nkpuchi a na-eme n'ụlọ, nke a kpara akpa ka ọ dị irè karịa bandanas ma ọ bụ ihe nkpuchi cone (dị ka N95) na ụmụ irighiri ụkwara na-ejegharị naanị sentimita 2,5 site na mkpuchi mkpuchi, jiri ụkwụ 3, na sentimita asatọ, karị.
Site na nhọrọ iji mee mkpuchi mkpuchi ihu n'ụlọ site na akwa a na-emegharị emegharị, Soffio wuru site na plastik elegharị anya, yana ọtụtụ nhọrọ ndị a na-ewegharị eweghachi, nhọrọ ndị ọzọ a mepụtara na mbute ọrịa a nwere ike ịnwe mmetụta na-adịgide adịgide gburugburu ebe obibi na mmetụta na nzacha n'ọdịnihu. Ndị na-emepụta ihe wepụtara ihe okike iji nyere ndị ahịa ha aka, ọkachasị ụlọ mmanya na ụlọ nri, na-arịọ maka ihe okike na ihe ngwọta bara uru iji nyere aka azụmaahịa ịmaliteghachi.
Ma ọ dị ọhụụ, ụzọ dị mma gburugburu ebe obibi iji mepụta ngwaahịa, ngwaọrụ agbakwunyere iji mee ka anyị jikọọ, ma ọ bụ mepụta teknụzụ ọhụụ dịka NASA's PULSE pendant nke na-ama jijiji mgbe aka gị na-abịaru ihu gị, oria ojoo coronavirus emeela ụfọdụ echiche okike na echiche ọhụụ. Ọ ga-abụ ihe na-akpali mmasị ilele ihe ọhụụ ndị a anya ma hụ nke nwere ike ịmalite n'ime ụgbọ ala ma ọ bụ teepu teknụzụ nke ọdịnihu.
Anya na Innovation bụ nlele kwa ọnwa na teknụzụ ọhụụ, ngwaahịa, na usoro.